Nnwom 39 NA-TWI - Ɔmanehunufo bɔneka - Mekae se, “Nea - Bible Gateway
Nnwom 38Nnwom 40
Nnwom 39 Nkwa Asem (NA-TWI)
39 Mekae se, “Nea meyɛ biara, mɛhwɛ yiye na meremma me tɛkrɛma nyɛ bɔne; sɛ ɔdebɔneyɛfo bɛn me a, merenka hwee.” 2 Meyɛɛ komm. Manka asɛm baako po; manka biribi a ɛfa ade pa ho. Nanso m’amanehunu kɔɔ so ara 3 maa ahopere hyɛɛ me so. Migu so redwen no, na me haw mu remia. Mantumi antena a mimmisa se, 4 “Awurade, mɛtena ase nna ahe? Da bɛn na mewu? Kyerɛ me bere a me nkwa bɛba awiei.” 5 Wɔatew me nkwa nna so! W’ani so de, me nkwa nna nka hwee. Nokware, ɔteasefo biara nsen mframa mu tutuw; 6 ɔnsen sunsumma. Nea ɔyɛ biara yɛ ɔkwa; ɔboa ahonya ano nanso onnim nea ɛbɛyɛ ne de. 7 Afei ɛdɛn na memfa me ho nto so, Awurade? Mede me ho to wo so.